Kugoverwa kwakakwana kweGNU / Linux: kuvhuraSUSE 13.1 !!! | Kubva kuLinux
Kugoverwa kwakakwana kweGNU / Linux: kuvhuraSUSE 13.1 !!!
Mhoro shamwari, mwedzi uno ndanga ndiine mwedzi wakashata kusvetuka paPC yangu uye palaptop yangu kubva distro kuenda ku distro (zvinoitika kwandiri kamwe chete makore maviri) .Pandakafunga zvakadzama nezvemubvunzo uyu, ndakaona chakakosha chinhu :) .
Nyaya iripo ndeyekuti ini ndoda kuve-up-to-date asi panguva imwechete ini ndinoda kuchengetedza yakagadzikana, yakanaka uye yakajairika-chinangwa-chakanangiswa kugovaniswa pamaseva, desktops uye zvinyorwa.
Ndakauya kune inonakidza kwazvo mhedzisiro mushure mevhiki rekuyedzwa, iro rakabhadhara.
Ini ndakaisa openSUSE 13.1 ese ari maviri maseva angu achitsiva Debian neCentOS pamwe neangu maPC uye pane yangu laptop inotsiva Fedora.
Zvinozoitika kuti tato Debian Chemhondoro CentOS yakapfuurawo nguva uye kune mabasa andinofanira kuchengeta kusvika pari zvino kunyangwe pamaseva.
Kune rimwe divi Fedora iri, saka yazvino, zvekuti nguva nenguva chisingawanzoonekwa bug uye hazviite kuti ndifare kuve nekuvandudza kernel inokonzerwa nekuvandudzwa kwevhiki mbiri kana nhatu, izvo zvinogadzira basa rekuita kuve uninstalling iyo yapfuura tsanga
OpenSUSE yakagadzikana kwazvo, yakabwinyiswa, yazvino uye yakajairika-chinangwa kugovera kune ese maPC nemaseva.
Ini ndaive nemukana wekushanda ndakashamaSUSE pane maseva ekambani kuGerman uye ndakashamisika kwazvo kuona maitiro eiyi distro huru.
Izvi zvakanditungamira kuti ndiise pamaseva angu, pamapc angu uye palaptop yangu.. Iwo maseva anayo isina nharaunda uye mune yakasara ndine iyi distro neiyo KDE nharaunda inotsiva XFCE kuzvibata chaizvo uye yakajeka kwazvo.
Ini ndinokuratidza tafura yangu uye ndichifunga kuti Kisimusi yasara nemazuva maviri chete kuti ubve:
Iye zvino ndinokuratidza kwaunga kurodha pasi uye maitiro ekurigadzirisa mushure mekuimisa:
Ivo vanovhura iyo terminal uye vonyora:
(vanonyora pasiwedhi yavo)
Muchidimbu chimwe chete tinopfuurira nematanho anotevera:
Kuiswa kwemapakeji akakosha:
zypper install vlc vlc-codecs fetchmsttfonts rar unrar java-1_7_0-openjdk-devel [/ kodhi]
Uye wakagadzirira !!! Ivo vatove neakavhurikaSUSE ne KDE yakagadzirirwa zvakakwana kushandiswa kwakawanda.
Kune avo vanofarira, yangu windows theme ndeye FormaN, iyo KDE theme ndeye Diamant uye ma icon ari OxyXmas inowanikwa pano: http://spacepenguin.de/icons/index.html
Kwaziso uye usakanganwa kupindura
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Kugoverwa kwakakwana kweGNU / Linux: kuvhuraSUSE 13.1 !!!
Ndinokukorokotedza pamakomputa ako uye kuti unawo sezvaunoda, pachinzvimbo ndakaisa OpenSuse 13.1 uye pandakatangazve Windows partition haina kuoneka, mushure mekuferefeta ndakawana nzira asi ini handina kufarira kuti iye haana rusununguko rwakafanana muNetrunner, Kubuntu, Kaos, Chakra kutumidza mashoma andakashandisa.
Mukupedzisa… ndakadzoreredza Netrunner.
Ini handirambe zvakaitika kwauri, asi iyo OpenSuse simaki ndiyo yakanakisa kana zvasvika pakuiswa kwemifananidzo. Iko kumisikidzwa kwaakandiudza (pasina ini kugadzirisa chero chinhu) ndiko kwainyanya kukodzera uye kwairemekedza iyo NTFS faira kupatsanura yandaive nayo neWindows 7. Ini ndinogara ndichisarudza yakasarudzika sarudzo muzvikamu.
Ini handisi kutaura nezve mugadziri ... Izvo zvakanaka kwazvo uye ndinomaka kuti ini ndinoshandisawo Windows asi pandinotangazve mushure mekuiisa, haina kuratidza imwe OS muGRUB. Ini ndinofanira kupinda OpenSUSE uye kugadzirisa kubva kuYAST saka kuti inogona kuonekwa pakutanga mu GRUB SW
Uye zvandiri kureva ndezvekuti Netrunner kana Kubuntu kana MintKDE inogadziriswa uye inogadzirika kupfuura OpenSUSE nekuda kwezvairi kukumbira iwe kusimbiswa kwezvose uye pachinzvimbo neBlueSystem zviri nyore uye zvinoshanda.
Zvakanaka ... pakupera kwezuva munhu wese anofarira "imwe nzira yekukwasva", ndosaka kune zvakawanda zvakagoverwa kuyedza uye kuchengeta iyo inokodzera iwe zvakanyanya. Manakiro ndeekuravira uye maRavourors ndiwo maFavourors.
Kana ini ndisingade kuti irambe ichikumbira mvumo yekushandisa inoda midzi…. Zvakanaka, ini ndinopinda musangano se mudzi kana mudzi mushandisi wangu. Pane chimwe chinhu chiri nyore kushandura chinoita kuti iwe urambe kugovera kwakanaka?
Hazvishamise, ndanga ndichishandisa kuvhuraSUSE kubvira 11.0 uye chokwadi ndechekuti handisati ndambosangana nedambudziko regub raunotaura.
Ndatenda zvikuru nekukorokotedza kwako Kana riri dambudziko grub, handina kumboshandisa Windows kwemakore saka handina kana basa nazvo: D.
Iyi mhinduro yaive yaGhermain
Zvakanaka, ini ndinozviona zvakafanana nemamwe ese evhurause, akajairwa, aine manejimendi ezororo, kana iwe uchiwedzera ekunze iwo, chimwe chinhu chinonetesa.
zviri nyore kwazvo kubata zororo ne zypper, izvo zvakasiyana zvakanyanya nemabatirwo aanoitwa nemaoko
yakapusa? iyo yast ukangoisa imwe kana maviri zororo, inotanga kukanganisa nekugadzirisa kwekutsamira uye imwe mushure meimwe.
Ne zypper iwe unogona kubata mapakeji kubva akasiyana marekodhi, uye ehe, sei gehena iwe unoda kuti ini nditange kunetsekana neanoenderana nepo ini ndisingazive zviri kuitwa?
muUbuntu pandinowedzera ekunze ekuchengetera, haina kumbobvira yandibvunza kuti nei kutsamira pakusarudza kana kusanzwisisika zvinhu, zvinoita kunge 2006, zvinongoziva.
MuArch uye nemhedzisiro yayo, kuiswa kwekushandiswa kwezvakachengetedzwa kungori kupenya: kugadzikana, kuita, kujekesa kumushandisi, kwakabatana munzvimbo imwechete uye nehurongwa hwehutongi hunosiya Zypper munguva yematombo.
Edza iwe pachako uye tizivise.
zypper inogona kuwedzera / kubvisa / kugadzirisa / kugonesa / kudzima marekodhi pasina yekugadzirisa mafaira kana kuisa pamberi mapakeji, saka yatove nyore uye inoshanda.
Ndanga ndichishandisa OpenSUSE pamachina mana kwemakore mana uye kunze kwekushandisa zvisiri pamutemo zvinyorwa, ini handina kumbove nematambudziko ekuvimbika. Maonero ako akavakirwa pane pfupi pfupi chiitiko.
Zvakanaka, sezvo pasina chinhu uye hapana akakwana, ndiyo yepedyo iripo kwaari.
Muchiitiko changu, Debian akandigutsa uye ini handisi kuzofamba kana Iceweasel isiri yemahara distros (anosanganisira Fedora naRHEL).
Iwe unogona kuisa IceCat mune chero kugoverwa, zvirinani kuti ndakazviita muFedora. Ini handizive zvikonzero zvako, Iceweasel ine chimwe chinhu icho Firefox isina kana mamwe maforogo eFedora?
Zviyo muFedora zvinobviswa zvoga: /
Kune rimwe divi, OpenSUSE iko kugovera kwandisati ndaedza, asi pakupedzisira ndakapedzisira ndaneta nekuchinja kugovera imwe mushure meimwe (distrohoppear) uye handisi kuzochinja.
Zvichida hazvina kutsanangurwa zvakanaka muchinyorwa, nekuti ini handinzwisise kushoropodzwa futi.
Fedora yagara iine yakanyanya kukwira-ku-danga yakagadzikana kernel. Pandakashandisa vatyairi ve nvidia, vakasvika zuva rapfuura kupfuura iyo kernel yekuvandudza, iyo yakagadziriswa, saka ndaitoziva kuti ndaifanirwa kushandisa yapfuura kernel vhezheni uye sekutaura kwako yagara yakachengeta matatu mavhezheni, ichibvisa chekare kwazvo. Pamwe ndinoshandisa kushandiswa kwakasiyana kwazvo, asi neese Fedora uye OpenSuse ndiri kufara uye ndisina matambudziko.
Mushure mekuyedza kwakawanda ndakagara neiyi. Chinhu chete chakashata nezvazvo, sezvavanotaura, zororo. Semuenzaniso, pese paunogadziridza unofanirwa kunge uine kopi yeiyo yekuisa DVD nekuti izvo zvinongedzo zvinongova deltas zvepakeji yekugadzirisa (uye kana iwe usina iyo DVD pakombuta yako kana iwe usina iso kutora nzvimbo kumwe kunhu, pamusoro peiyo delta Iwe unotora pasi yepakutanga package, ndiko kuti, ichatora pasi kaviri isina kukuzivisa iwe; tisingataure kuti sarudzo yekumisikidza ndeyekudzima zvese zvakabuditswa mushure mekunge yaiswa, icho chinhu chimwe chete icho chinodzokororwa gadziriso yega yega, zvinogona kuve pachena kune avo vakashandisa rpm asi kwete kune vamwe vashandisi). Iyo multimedia yekumisikidza iri nyore asi iyo packman repo inogadziridzwa mazuva ese matatu, izvo zvinokumanikidza kurodha zvese zvese kazhinji (uye kana iwe uine mutambo wemazana emazana megabyte, ipapo zvimwe chete).
Kune vamwe vese, yakanyatsogadzikana, yakashambidzika uye yakakwira-ku-dheti (iyi ndeimwe yeakakura ma distros ane anenge asina zvigadzirwa, izvo zvinotaura zvakawanda nezvehunhu hwayo) Zororo ndiro chete chinhu chavanofanira kugadzirisa.
Pindura kuna Lelo
Ini handibvumirani !!!
Ini ndakaisa Fedora 19 uye ini ndaida kugara ipapo kwechinguva (apo ini ndaidzidza kuisa Arch) asi kwete, senguva dzose Fedora ichindipa matambudziko (kwandiri), ndakatanga Fedora ndokuishandisa uye mushure mechinguva windows aizo kutanga kurovera. dema dema uye ndaisakwanisa kuona chero chinhu uye kunyangwe dzimwe nguva ndaitadza kudzima netbook nekuti ndaisakwanisa kuona, ini handina kuwana mhinduro.
Ipapo ini ndakaisa Xubuntu uye kana ikashanda mushe pakutanga asi handizive kuti nei yakatanga kundipa matambudziko mashoma (yakanonoka zvishoma uye, imwezve yangu, handina kuzomboisiya sezvandaida 🙁).
Mukupedzisira, ndakafunga kuyedza imwe distro uye ndipo pandinorangarira OpenSUSE uye KDE, kuisa OpenSUSE KDE uye kuigadzirisa uye inofamba mushe, hapana matambudziko (ini handina kana matambudziko kubva 12.3 kusvika 13.1) uye ini ndichave mairi kusvikira wadzidza maitiro ekuisa-kumisikidza-kushandisa Arch, ziva kushandisa-gadzirisa Fluxbox uye uve nenguva yayo.
Zvakanaka, ndakaedza zvakawanda kutsvaga "IDEAL" kugovera kunonyatsokodzera kwandiri uye ndakazopedzisira ndashandisa Netrunner, pane ese KDE iyi ndiyo inokodzera ini pane zvese izvo inounza uye haina kumbondipa matambudziko makuru kana matambudziko asingakwanise kugadziriswa Kutsvaga mugoogle.
Manjaro Linux Nharaunda akadaro
Manjaro nenharaunda yake vane chekutaura nezvazvo: Chaizvoizvo? : trollface:
Pindura Manjaro Linux Nharaunda
kwete zano rakanaka kwazvo kushandisa zypper dup (dist-kusimudzira) nenzira iyoyo
Ini handina kusangana nedambudziko nemutemo uyu neyakagadzika zororo ye openSUSE pamwe nePacman .. Zvine musoro kana iwe ukashandisa zvimwe zvekunze zvekuzorora uchafanirwa kumisikidza zvakakosha zveumwe neumwe kudzivirira matambudziko 😀
Yohan Graterol akadaro
Fedora ne yum otomatiki inobvisa tsanga dzekare: S Handizive kuti nei uchiibvisa nemaoko.
Pindura kuna Yohan Graterol
Zvakanaka ini ndaigara ndichibvisa tsanga .. ini ndaigara ndichichengeta maviri ekupedzisira. Mubvunzo wetsika 🙂
nekuti apt-tora haigone kubata mapakeji kubva kwakasiyana repos uye ndipo pakaiswa masisitimu e * buntu
komendi iyi yaive ye @ pandev92
Mushure mekuyedza uye nekushandisa ese kugoverwa kwaunotaura nezvako, zvebasa nekushandisa wega, ndinogona kutaura kuti yakanakisa zvese-chinangwa KDE distro ine yakaenzana uye yakagadzikana yekuvandudza macirc ...
Kwete zvekare, kana zvishoma, edza, ishandise, kunyangwe iyo KDE mini me vhezheni, neyakajeka uye yakakosha zvakanakisa kuvaka sisitimu nemapurogiramu uye nekugadzirisa zviri nyore.
Pindura kuna Hasher Arg.
OpenSUSE yakanaka kwazvo distro, asi iwe unofanirwa kuita uye kugadzirisa kuti ugadzirire. Ini handizive kana paine anoziva mambure ekumisikidza kuisa
kubva OpenSUSE, kana maitiro ekuisa chete iyo base system?
Mukutanga kwangu muLinux, kumashure muna2004, ndaifanira kuzviita sezvizvi. Ini ndakaburitsa kdebase kutanga uye kubva ipapo ndakaisa zvimwe zvese. Ehezve, kumashure ipapo ini ndaingova ne56k yekubatanidza. Iye zvino zvaizoita kunge zvinonetesa.
pane peji rekurodha iwe une netinstall sarudzo
Mhoro. Ini ndichataura zvandakaona.
Ndakaiisa munguva pfupi yapfuura muGnome vhezheni, pamwe neDebian yandinoshandisa mazuva ese.
Ini ndaisada Gnome 3 zvakanyanya, ndakaiwana isina kunyanya kugadzikana kana ini ndaisanzwisisa maitiro ekuigadzirisa, uyezve inononoka paPC yangu, saka ndakaibvisa ndikaisa Xfce. Ndichiri kuda kuipukuta 🙂
Ini zvakare ndine E17 yakaiswa uye ini ndinoida chaizvo, yakanaka kwazvo.
Ndine mamwe matambudziko nemutauro, system yacho hafu Spanish uye hafu muChirungu? uye chimwe chinhu chine ruzha icho chinongoti zii dzimwe nguva.
Zvandakaita iYast2, ndinofunga zvakanaka kuva negadziriro yepaneru senge nezvose zvakabatanidzwa. Zvakare chimwe chinhu chitsva uye chandakafarira, kuenda kune iyo yepamutemo peji uye wobva wawedzera marekodhi "nekukosha kamwe"
Zvinoita senge yakanaka distro kwandiri, ini ndaizofanira kuzviedza pane imwe yazvino PC musina kuchinja nharaunda kana kuigadzirisa zvakanyanya. Ini ndakajaira zvikuru Debian uye pane zvinhu zvandisingazive maitiro pakuvhuraSUSE, mamwe madhairekitori uye mafaira ekugadzirisa anosiyana.
Ini ndakangoisa nezuro, ini ndaingova nedambudziko neyemaneja maneja kuti inogadzirisa asi ndakaigadzirisa nekukurumidza neyast2 iyo yaiita senge yakanaka kwandiri, nekuti ini ndakaisa mwenje weiyo Virtualhost uye kubva pandingaite kuti ndiite apache nemariadb. Ini ndanga ndamboedza kuvhura kare, asi yanga isingaenderane, panguva ino ndakaifarira lol chete nhasi yashanduka uye mushure mekugunun'una haichaitike, inotangazve. Saka hapana nzira, ini ndichaedza kutsvaga mhinduro, nekuti kunyangwe iyo grub yakanyatsogadziriswa uye ini ndaifarira kde theme.
Pindura kuna benctrox
Ini ndaida kutaura kuti neniwo ndinosimbisa kuti openSUSE ndiyo imwe nzira yakanaka izvozvi. Ndanga ndichiishandisa ichangopfuura futi. Ini ndaive naKubuntu 13.04 uye nemagumo ekutsigirwa, ini ndakasimudzira kusvika 13.10. Mhedzisiro yacho yaive yakaipa chaizvo, zvinhu zvakawanda zvakatanga kutadza. Ndakaita izvi kudzoreredzwa, uye manzwiro acho akanaka kwazvo. Semuenzaniso, ini ndinogona kutoshandisa iyo plasmoid memoryerthemilk. Zvakare pakupedzisira korganizer inowirirana WELL uye bi-inotungamira neangu gmail karenda. Uye iyo lyx haina kundipa zvisinganzwisisike kukundikana. Uku ndekwekutaura pamusoro pezvinhu zvandinoona zvirinani. Iniwo ndinoona ichinyanya kukwenenzverwa uye zvirinani kupedzwa.
Hongu ndinoda kuwedzera kuti kune mamwe macomputer enharaunda ayo anonakidza kuwedzera. Tinogona kuzviita, tisingafanirwe kuvaisa iwo nemurairo iwoyo, mune sarudzo yekuchengetedza zvinyorwa, uye ipapo "nzanga dzemunharaunda" idzo Yast inotipa. Ndiri kufunga, semuenzaniso, ye libdvdcss, Mozilla, Libreoffice repositories ... uye kuti vangatsanangurwe sei kuti vamwe vave pamberi pevamwe.
Munguva pfupi inotevera uchazodzoka, izvi ndizvo zvinoitika kwandiri pandinobuda munzvimbo yangu yekunyaradza mune iyi fedora: p asi ini ndinoona kuti mune ramangwana uchaedza CentOS 7 uye hausi kuzofamba kwechinguva.
Ndakamirira CentOS 7 .. Ichave kugovera kukuru senge RHEL yese, asi inofanira kucherechedzwa kuti vhezheni 6 yapera kushanda .. Inguva yekuchinja 😀
Yakanaka distro zvishoma yakaremerwa kuravira kwangu ndosaka ndichisarudza fedora.
Ndatenda kwazvo zvakandibatsira zvakanyanya, kune newbie murombo, ndatenda
Ndakaverenga pano kuti iwe une matambudziko nemutauro, kuti iwe une hafu sisitimu muSpanish uye imwe hafu muChirungu. Ndizvo chete zvinoitika kwandiri.
Icho chokwadi ndechekuti padesktop ndine zvese zvakanaka uye ndakazviisa kubva kuYaST> mutauro, asi palaptop haina kukodzera, uye ini handioni nzira yekuzviita futi.
Pindura kune edvals
Ini ndanga ndisina kana dambudziko nemutauro mu openSUSE. Ingosarudza mutauro unosarudzwa muYast uye wozovhura terminal uye pasi pemidzi nyora
Izvi zvichaisa mutauro zvachose. Wobva watangazve iyo pc uye ndizvozvo.
Kuchengetedza matanho aya, ini ndinokurudzira zvikuru kushandisa iyo yakavhurikaSUSE DVD yekumisikidza sezvo ichisanganisira nharaunda dzese dzakakosha pamwe nemitauro kana, zvichikundikana izvo, shandisa netinstall vhezheni yacho :).
Kuteedzera Linus Torvalds: Gadzira yako yega sisitimu yekushandisa kubva pakutanga (II)